I-Photoshop: buyela emuva ngesikhathi > UVielhuber David
I-Photoshop: buyela emuva ngesikhathi05
Lapho abafowethu uThomas noJohn Knoll beqala ukwenza i-Adobe Photoshop ngo-1987, ngangingakazalwa. Namuhla, ku-2013, isoftware ingenye yezinhlelo ezaziwa kakhulu ngokujwayelekile kanye nomholi wemakethe ongenakuphikiswa ekuhlelweni kwesithombe. Ngenxa ye-Adobe kanye ne-Computer History Museum, isoftware manje izogcinelwa inzalo ngendlela ekhetheke kakhulu.
Ikhodi yomthombo ye-Photoshop 1.0.1 isanda kukhishwa ngezinhloso ezingezona ezentengiselwano - imigqa engu-128,000, ngemuva kokuhunyushelwa kukhodi yomshini, ayilingani neze ku-floppy disk engu-3.5 ”(1.44 MB) . Yize kunzima impela ukuhlanganisa ikhodi ebhalwe ePascal kwihadiwe yanamuhla (Mac), ikhodi inenani elikhulu lomlando.
Yize inguqulo yokuqala ibingasekeli izingqimba noma izindlela, ukuqhathanisa nenguqulo yamanje ye-Photoshop CS6 kukhombisa ukuthi yikuphi ukufana okumangazayo okusengatholakala. Kuneminyaka engama-25 phakathi kwezithombe-skrini ezilandelayo - okwenza inhliziyo yesifiso ishaye ngokushesha! Qaphela ukuhleleka okucishe kufane kwamathuluzi ngakwesobunxele:
I-Photoshop 13.1.2 (CS6)